Okulandelayo | Ukulungiselela Ikusasa Lomsebenzi
Ukulungiselela Ikusasa Lomsebenzi
Umsebenzi wethu ukwakha izwe elingcono ngebhizinisi. I-NextMping ™ yindlela yethu.
Sikholwa ukuthi ikusasa lomsebenzi lincike kubaholi, amaqembu kanye nosomabhizinisi abanjengawe ukudala inani eliyisimanga kumakhasimende akho kanye nabasebenzi bakho.
Siyiqembu elihlangene ngokuzibophezela kwethu ekusizeni abantu, amaqembu onke nezinhlangano zonke nge-NextMapping ™ ikusasa elingeza inani elikhulu kanye nokuhlangenwe nakho okuhle kumakhasimende abawasebenzayo, bonke abasebenzi ababalulekile abanakho ebhodini kanye nemiphumela yebhizinisi .
Kusuka ezinqubweni zethu ezifakazelwe ze-NextMping ™ eziya (r) ekuzixazululeni kwezezixazululo zebhizinisi ezisiza izinkampani ukubikezela ushintsho emsebenzini futhi zibone ikusasa lomsebenzi manje. Sinikezela ngamathuluzi, izinsizakusebenza, ukuqonda nokuqeqeshwa ukusiza amakhasimende ethu ukuba athole inzuzo yokuncintisana nempumelelo ephumelelayo.
Isikhathi se-NextMapping ™ Ikusasa lakho Manje! Singasiza - khetha eyodwa:
Ngifuna ukufunda kabanzi nge-NextMapping ™ ye Leaders
Ngifuna ukufunda kabanzi nge-NextMapping ™ ye Amathimba
Ngifuna ukufunda kabanzi nge-NextMapping ™ ye Osomabhizinisi
Hlangana ne-NextMping yethu™ umsunguli
Waziwa njengomgqugquzeli weKusasa Lomsebenzi ongu- # 1 ngu-Onalytica, nombhali wezincwadi eziyi-9 kufaka phakathi uhlelo lwesibili i- “NextMapping ™ - Lindela, Zulazula futhi Wenze Ikusasa Lomsebenzi” nencwadi yomsebenzi.
Ezinye izihloko zamabhuku zifaka phakathi "Ubuciko Bokushintsha Ubuholi - Ukushayela Ukushintshwa Kwezikhathi Zokufunda Ezisheshayo" (Wiley 2015), "Izindlela ze-101 Zokwenza iGenerations X, Y no-Zoomers Happy at Work" (2010) nezinye izincwadi ze-4 amakhono obuholi adingekayo ukuze ube nekusasa lomsebenzi ulungele.
Ikusasa likaCheryl lomsebenzi wokucabanga komsebenzi ubonakaliswe ezincwadini ezifana neHuff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Magazine ye-Enterpriseur, i-Read Digest, i-CBS Online, i-NBC Online, i-Fox Online nokunye.
Sekuyiminyaka engaphezu kwamashumi amabili uCheryl akhe idumela lokuletha inani elingavamile kumakhasimende afaka i-AT & T, iBell Mobility, i-Omnitel, iGartner, iBritish Telcomm, iManulife, kanye nezinkampani eziphakathi nendawo nosomabhizinisi ezimbonini ezibandakanya ubuchwepheshe, ezempilo, ezolimo, ezezimali, umshuwalense nokuningi.
I-NextMping ™ yathuthukiswa njengophawu lwebhizinisi lokuphathelene nokubandakanya okubandakanya wonke umsebenzi nocwaningo lukaCheryl ngekusasa lomsebenzi nobuholi obudingekayo ukuze kuguqulwe izinguquko emsebenzini. Isikhathi sokuzwa hhayi ngekusasa nje kepha ukusebenzisa i-NextMapping ™ ukufika lapho! Ubuchwepheshe emsebenzini kufanele busetshenziselwe ukulungiselela ikusasa kugxilwe ekutheni ubuchwepheshe bungayithuthukisa kanjani imiphumela yabantu.
I-NextMping Yethu™ ochwepheshe
Abaqeqeshiwe bethu be-NextMapping ™ abaqinisekisiwe baqeqeshwa futhi baqinisekiswa nguCheryl Cran ukubheka ibhizinisi lakho ngesihlungi esifanayo esenziwa nguCheryl nawo wonke amakhasimende akhe omhlaba.
Bazokunikeza impendulo eqondile ye-1-on-1 ngokuthi amafilosofi akhe nezinhlaka ezilandelayo ze-NextMiling ™, ukuqeqeshwa nezinqubo ezingakusiza kanjani wena nenkampani yakho futhi zikunikeze amandla ngamasu wokulungiselela ikusasa Lokusebenza futhi uthathe ibhizinisi lakho liye izinga elilandelayo.
Ibizwa ngokuthi yi- #1 Ikusasa Lomsebenzi Wokulimaza
Umuntu ophothule iziqu zohlelo lokuqamba imibono olusha
Iqanjwe ngekusasa eli-10 eliphezulu le-future of work moves & shakers ku